Podcast - ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) ။ ကမ္ဘာ့ကျော်ကြားသောဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန် Dudley Danoff & Dr. Diana Wiley (2016) - Your Brain On Porn
Podcast တခုကိုမှ Link ကို
ဒေါက်တာ Dudley Danoff, MD တစ်ဦးကမ္ဘာကျော်ဆီးရောဂါပါရဂူ, နဝမအကြိမ် program ကိုပြန်သွားကြ၏။ သူ့စာအုပ် "ဖြစ်ပါတယ်မဆိုအသက်အရွယ်မှာအရေးပါနေပါနည်း - အမျိုးသားလိင်ကျန်းမာရေးဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်"(www.theultimateguidetomenshealth.com) ။ ဤအစီအစဉ်၏အဓိကအာရုံစိုက် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) ဖြစ်ခဲ့သည်။ လုလင်တစ်ဦးကကြီးထွားလာအရေအတွက်ကသူတို့ဆယ်ကျော်သက်စဉ်အခါကသူတို့ (နေဆဲဖွံ့ဖြိုးဆဲ) ဦးနှောက်နီးပါး porn အတွက် marinated ကြောင့်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု sabotaged ပြီယုံကြည်ကြသည်။ အဆိုပါရလဒ်မကြာခဏအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်မှလျော့နည်း arousal ဖြစ်ပါတယ်။ porn လိင်အဘို့ဆိုးရွားသည်။
ပညာရေးအပြင်ယောက်ျားလိင်တံအရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်. Hang-ups ရှိနိုင်ပါသည်, PE တွေ့ကြုံခံစား ejaculatory အခက်အခဲများနှင့်လက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်များရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မိန်းကလေးများအမျိုးသမီးလိင်ယောက်ျား၏အကြိုးအတှကျရှိကွောငျးမိစ္ဆာအယူအဆသင်ယူနေကြသည်; လူအပေါင်းတို့သည်စဉ်ကသူတို့ကိုပျော်မွေ့တတ်၏အဘယ်သို့သောအကြောင်းနည်းနည်းလေ့လာသင်ယူ။ တစ်ဦးကအထောကျအကူက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ် www.YourBrainonPorn.com။ ဤအစီအစဉ်ကိုနားထောင် - နှင့်တွေအများကြီးသင်ယူရ! ဒေါက်တာ Danoff အမြဲအချက်အလက်များ၏ဥစ္စာဓနဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ 24, 2016 By ဒိုင်ယာနာ Wiley